विवाहको पहिलो रातमै श्रीमानले धेरै माया गर्न थालेपछि श्रीमतीले मागिन् डिभोर्स….! « गोर्खाली खबर डटकम
सम्बन्धविच्छेद किन गर्न चाहिन् ? यसको कारण भने निकै रोचक छ । उनका अनुसार उनलाई श्रीमानले अत्यधिक माया गर्ने, कहिले झगडा नगर्ने भएकाले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेकी हुन् ।नेपालमा अर्को एउटा भनाई के पनि चर्चामा ‘चिनी पनि धेरै खाए तितो हुन्छ’ भन्ने भनाई रहेको छ । माया धेरै खाँदा तितो भएपछि एक महिला फुजैरास्थित सारिया कोर्टमा श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न पुगेकी छिन् ।
कलेज पढ्ने युवतीलाई सह–चालकले आन्टी भन्दा हाँस्ने युवकले भेटे राम धुलाई [भाइरल भिडियो]